Orinasa mpamokatra sy mpamatsy fosfat any China | Fortune
Ny plasticizeris dia karazana mpanampy molekiola avo be ampiasaina amin'ny indostria. Ny fampidirana an'ity karazana fitaovana ity amin'ny fikirakirana plastika dia afaka manatsara ny fahamendrehany sy ny fanamorana ny fanodinana, mampihena ny fifanintonana eo amin'ny molekiola polymer, izany hoe ny hery van der Waals, ka mampitombo ny fivezivezena ny rojo molekiola polymer, mampihena ny kristaly misy rojo molekiola polymer.
Rano mijanona chromatography gazy (mari-pana miasa fara-tampony 175 ℃, diethyl ether solvent) mifantina toy ny glycol polyethylene ary afaka mitazona fangaro alikaola.
Triphenyl Phosphateis dia poizina misy flammability.
Tokony hotehirizina ao anaty tontolo mangatsiaka, misy rivotra, maina izy io ary tehirizina mitokana amin'ny oxidizer.
Triphenyl Phosphate dia ampiasaina ho plastika ho an'ny chromatography gazy mijanona, cellulose ary plastika, ary toy ny solon'ny camphor amin'ny celluloid.
Izy io dia ampiasaina hampitomboana ny plastika sy ny fihenan'ny plastika mandritra ny fanodinana sy ny famolavolana.
Nampiasaina ho plastika ho an'ny nitrocellulose, fibre acétate, polyvinyl chloride, ary plastika hafa izy io.
Ampiasaina indrindra ho plastika maharitra amin'ny resin cellulose, résin vinina, fingotra voajanahary ary fingotra sentetika, ary azo ampiasaina amin'ny famolahana plastika maharitra amin'ny plastika injeniera toa ny esera triacetin manify sy ny sarimihetsika, foam polyurethane henjana, resina fenolika, PPO, sns.
1 、 Teny mitovy hevitra: estera asidra phosorika triphenyl; TPP2 、 Formula: (C6H5O) 3PO 3 、 Lanjan'ny molekiola: 326 4 、 CAS NO .: 115-86-65 、 Famaritana fisehoan-javatra: Fongotra fotsy mangatsiakaAssay: 99% minSokatry ny hery misintona (50 ℃): 1.185-1.202 Sandaida (mgKOH / g ): 0,07 maxFeno Phenol: 0.05% maxMelting Point: 48.0 ℃ minColor Value (APHA): 50 maxWater anatiny: 0,1% max6 、 fonosana ： 25KG / harona taratasy harato, tontonana vita amin'ny foil eo amin'ny pallet, 12,5 taonina / 20ft FCL Ity vokatra ity dia entana mampidi-doza : UN3077, kilasy 9